Lubnaan: Kacdoon ka dhan ah madaxda dalka oo lagu baaqay | Somaliland Mirror
Home WARARKA Lubnaan: Kacdoon ka dhan ah madaxda dalka oo lagu baaqay
adminAug 09, 2020WARARKA0
Qaar ka mid ah dadka reer Lubnaan ayaa Axaddii ku baaqay kacdoon joogto ah oo lagu ridayo hoggaamiyayaashooda xilli ay jirto caro dadweyne oo ka dhalatay qaraxii weynaa ee Talaadadii ka dhacay Beirut.
Dibadbaxayaasha ayaa ugu yeeray dowlada in ay xafiiska banneyso sababo ay ku tilmaameen dayacaad sababtay qaraxii Talaadada. Carada dadweynaha ayaa Sabtidii isku bedeshay rabshado ka dhacay bartmaha caasimadda Beirut.
Wadaadka sare ee hogaamiya Masiixiyiinta Maronite ee dalkaasi Bechara Boutros al-Rai ayaa ku baaqay in golaha wasiirradu ay is casilaan haddii aysan awoodin iney bedelaan habka ay ku shaqeeyaan.
Wasiirka warfaafinta Manal Abdel Samad ayaa Axadda maanta ah sheegtay in ay is casileyso, iyadoo ku sababeysay qaraxii Talaadada iyo fashilka dowladda ee ka gaabinta dib u habeynta.
Daraasiin dad ah ayaa ku dhaawacmay banaan-baxyadii Sabtida, oo ahaa kii ugu ballaarnaa tan iyo bishii Oktoobar markii kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen waddooyinka ayna dhigeen banaanbaxyo looga soo horjeedo musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Qiyaastii 10,000 oo qof ayaa isugu soo baxay fagaaraha Martyrs, kaasi oo fiidnimadii isku bedelay goob uu dagaal ku dhexmaray booliiska iyo dibad-baxayaasha oo doonayay in ay tagaan dhismaha baarlamaanka.
Laanqeyrta Cas ayaa sheegtay in ay ka daaaweysay ilaa 117 qof dhaawacyo soo gaaray Sabtidii iyadoo 55 qofna la dhigay isbitaalka.
Qaraxa Lubnaan ayaa waxaa ku dhintey 158 qof, iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 6,000 oo qof. 21 qof ayaa ilaa iyo haatan lagu la’yahay qaraxaasi
Previous PostWakiilkii Somaliland ee Taiwan Oo Si Rasmi Ah U Hawl Galay. Next PostDeg Deg: Somaliland oo joojisay dhamaan qalabkii isgaadhsiinta aha ee ka imanayay China.